Location: musha » Kutumira » Nhau dzeWaya » Chishandiso Chitsva cheKurwisa Pakarepo Shuwa Zvido
Botanical-yakaiswa chingamu inomisa kuchiva kweshuga mumaminetsi maviri chete!
Nhau dzakanaka kune avo vanogara vachizvipira kunyengedza shuga: Israel kutanga-up Sweet Victory, Ltd., yakagadzira mutsara unonaka webhotani-yakapinza chewing gums iyo yakagadzirirwa kumisa kushuga kurapwa kweshuga mumakwara avo.
Iyo proprietary chewy composition inoshanda mukati memaminitsi maviri nekuvharira mashuga anotambira parurimi, uye mhedzisiro yawo inogona kusvika maawa maviri. Panguva iyoyo chikafu chinotapira kana zvinwiwa zvinowanzonakidza manzwi zvinoravira zvakapfava kana kutovava, uye shuwa yekudyisa masiwiti inogona kudzikiswa, ichitora nguva yakareba kupfuura maitiro emuviri.
Kutora Sugar Addiction
Sekureva kweInnova Market Insights 'yepasi rose Health and Nutrition Survey, muna 2021, 37% yevatengi vepasirese vakaratidza kuti vakadzikisa kudya kwavo shuga mumwedzi gumi nemiviri yadarika. Kuedza uku kunoratidza maonero ane vanhu vakawanda ekuti kunwa shuga yakawanda chinhu chinokonzera mamiriro akasiyana siyana, anosanganisira dental caries, weight gain, uye chirwere cheshuga. Tsvagiridzo yakaratidza basa reshuga mukuita opiate receptors (nzvimbo dzemubairo) muuropi, izvo zvinogona kutsanangura chimiro chayo chinoyevedza. IAmerican Heart Association inokurudzira kuti vakadzi vamise shuga yakawedzerwa kusapfuure maspuni matanhatu pazuva (12 magiramu), uye varume vanoganhurira shuga isingapfuuri mapfumbamwe pazuva (24 gramu).
“Vakawanda vedu tinorwisana nokuchiva zvinotapira zuva nezuva,” anodaro Gitit Lahav, nyanzvi yezvekushanda kwendangariro akapedza anoda kusvika makore gumi achitsvakurudza kubatana kwakaita zvokudya zvinovaka muviri nepfungwa. Lahav akabatanidza Kukunda Kunotapira naShimrit Lev, murairidzi wezvekudya. “Kunyangwe kuziva nezvezvinokonzeresa kunwa shuga yakawandisa pakurarama kwako kuchikura, kuramba muitiro weshuga idambudziko chairo kune vazhinji vedu. Izvi ndizvo zvakatikurudzira kutsvaga mhinduro yaizobatsira vatengi kutora kudzora zvirinani pasarudzo dzavo dzekudya. "
Nekumashure kwavo mune zvebotanicals, Lahav naLev vakatendeukira kune yekare Indian botanical gymnema, (Gymnema sylvestre) inozivikanwa kubva kuAyurvedic tsika nemhedzisiro yayo yakanaka paglucose metabolism. MuIndia, inozivikanwa se "gurmar," Hindi ye "shuga muparadzi." Yakanzi inhibisa kubatwa kweshuga kupfuura zvayakaita parurimi. "Kurongeka kweatomu yebioactive gymnemic acid molecules chaizvoizvo yakafanana neiyo yemamorekuru eglucose," anotsanangura kudaro Lev. "Mamorekuru aya anozadza nzvimbo dzekugamuchira pakuravira uye anodzivirira kushandiswa nemamorekuru eshuga ari muchikafu, nekudaro achidzikamisa kushuvira."
MuIndia, mashizha egurmar anotsengwa kuti aite mhedzisiro yacho. "Takashamiswa nekukurumidza kushanda kunoita izvi," anodaro Lev. "Takatsvaga nzira inoshanda, inonakidza, uye iri nyore yekuendesa yemuriwo uyu, uye takagadzirira kukunda hunhu hwawo hwekuvava." Vaviri ava vakaedza mabikirwo ekubika chewing gum emumba pakutanga, vachishandisa makiti ekugadzira chingamu. Vakabva vasanganisa matekiniki neruzivo rwavo rwekudya kunovaka muviri kuti vatore resipi yakakodzera vachishandisa mashoma akasarudzika ekutapira. Iyo formula yakawedzera kukwenenzverwa nerubatsiro rweanotungamira Israel confectionary anogadzira. Nhasi, zvichitevera kutsvagwa kwemashizha egymnema muIndia, yekutanga inogadzira chingamu chayo chirimwa munzvimbo yekuItaly yakatenderwa kugadzira ma supplements anoshanda uye anowanikwa mumhando mbiri: peppermint, ndimu uye ginger.
utano Itari tsvakurudzo
Kudzokorodza paMars: Kubva Kare Packing Material kuenda kuNew Poop
Minister Bartlett muCanada Yezvakakosha "Jamaica 60"...
Kubudirira muDrug Options for Inflammatory Ganda...
New Clinically Proven Digital Health Technology ye...
Sir Richard Branson vanotaura vachitsigira ...
France inopedza mask mandate, COVID-19 mapasipoti